युवा र बौद्धिक प्रतिनिधिले ऊर्जावान् कांग्रेस बनाउलान् त ? « Nepal Bahas
युवा र बौद्धिक प्रतिनिधिले ऊर्जावान् कांग्रेस बनाउलान् त ?
प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०७८, मंगलवार १९:०७
नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनका क्रममा भइरहेका स्थानीय तहका निर्वाचनले देशभर राजनीतिक तरंग ल्याएको छ । युवाहरुको राजनीतिमा चासो नहुने क्रम चलिरहेको अवस्थामा कांग्रेसमा भने युवाहरुको आकर्षण बढेकाे देखिएको छ ।
गाउँ तथा नगरबाट युवा प्रतिनिधि धमाधम चुनिन थालेका छन् । क्रियाशील सदस्य, स्थानीय तहका वार्ड प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, पालिका सभापतिको निर्वाचनलाई हेर्दा युवाहरु कांग्रेसको राजनीतिमा अगाडि आउने देखिएको छ । यति मात्रै होइन अहिले केही बौद्धिक जगतको पनि उपस्थिति बढ्न जाने तल्लो तहका निर्वाचनले देखाएका छन् ।
यो अवस्थाले अवश्य पनि लामो र गौरवपूर्ण इतिहास भएको पार्टीलाई अटुट रुपमा अघि बढ्न बाटो प्रशस्त गर्ला । यही निर्वाचनको परिणामभित्र केही नकारात्मक पक्षहरु पनि सँगै आउने सम्भावना देखिएका छन् । यसलाई लिएर कांग्रेसमा लामो समय निष्ठाको राजनीति गर्दै आएका नेता, कार्यकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यतातिर ख्याल गरिँदै छ कि छैन ? ती नकारात्मक पक्षलाई बेवास्ता गरेर बसियो भने लामो इतिहास बोकेको पार्टी अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि जान सक्छ ।
गाउँ, नगरबाट युवा नेतृत्व चुनिँदै गर्दा कांग्रेसको राजनीतिमा राम्रै आशा जगाएको त छ तर पुराना निष्ठावान् नेता, कार्यकर्ता जसले आफ्नो जीवन सो पार्टीलाई समर्पण गरे तिनको विस्थापन भयो कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ । नयाँ पुस्ता जसले बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसादलाई नचिन्ने, उनीहरुको योगदान बारे थाहा नपाउने, कांग्रेसको आदर्श के हो ? नीति के हो ? त्यसको पनि वास्ता नगर्नेहरु तलैदेखि नेतृत्वमा आए भने कांग्रेसको स्थिति कस्तो होला ? यो चासो र चिन्ताको विषय बन्ने अवस्था आएको छ ।
आदर्श तथा निष्ठावान् नेता, कार्यकर्ता गणेशमान सिंह पुत्र तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसको नेतृत्व उही पुराना नेताको हातमा जाने हो भने कांग्रेस निकट भविष्यमै प्रजा परिषद्को हालतमा पुग्ने बताएका छन् । हुन त उनले आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् र आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न त्यसो भनेको हुनसक्छ । त्यही भनिएला पनि ।
जे जस्तो अवस्था र उद्देश्यले यो कुरा भनिए पनि यो भनाइ यथार्थमा आधारित भने छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सभापतिमा फेरि अर्को कार्यकालका लागि दोहोरिने तयारीमा छन् । उनले सबै शक्ति त्यसैमा लगाउँदै छन् ।
उनको उम्मेदवारी केका लागि त ? पार्टीलाई सशक्त बनाउन ? पार्टीलाई नयाँ गति दिन ? आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरिएका विशेष कामलाई पूर्णता दिन ? यी कुनै पनि कुराका लागि उनी पुनः सभापतिमा दोहोरिन लागेको नभई सधै शक्तिमा रहिरहने र सधै सर्वेसर्वा भइरहने मनसाय मात्र देखिन्छ ।